Bakhala ngokunuka kwendle | News24
Bakhala ngokunuka kwendle
PHOTO: lethiwe makhanyaAmalunga umphakathi wase-France ngesikhathi evale amasango alapho kusebenzela khona inkontileka efaka ipayipi elizothutha indle.
UMPHAKATHI wasendaweni yaseFrance ka-ward 18 kanye no-ward 13 uthu ukhathele ukunukelwa indle ngisho uhleli ngapahakthi ezindlini.
Lo mphakathi udinwe wamisa ukusebenza kwenkontileka efaka amapayipi azothutha indle esikoleni iMpumelelo Primary kaye noMvuso High ngolwesibili mhla zili-18 kuMandulo (September) ngoba ethi afuna kuqalwe kufakelwe wona kuqala ngaphambi kokuba kufakwe ezikoleni.
Le nkontileka iqale ngesonto eledlule ukusebenza kanti bekule indeleke ukuba iqede ngemuva kwezinyanga ezine.
Ngesikhathi i-Echo ihambele kule ndawo ngoLwesibili ifice amalunga omphakathi akule nadawo akade edinwe egane unwabu evimbe amasango akulenkontileka ethi angeke kuze kuqhubeke ukusebenza bengakazitholi izimpendulo ukuthi kungani kuqalwa ngezikole ukufakwa amapayipi endle ekubeni bona sekuphele iminyaka engama-21 bathenjiswa ukuthi bazofakelwa amapayipi athuthelwa indle.
Lo mphakathi usebenzisa izindlu zangasese eziflashwayo kodwa bathi manje azisasebenzi ngoba izitamukoko zamo zigcwele indle isivele ibuye yonke igwale endlini yangasese lena esendlini bese kube khona iphunga elingabekezeleki.
Umholi womphakathi kule ndawo uMnu Mduduzi Hlongwane uthe bazimisele ngokuthi bavale lamasango kuze kube imeya yomasipala uMsunduzi iyafika izothatha uhlu lwezikhalo zabo.
“Kudala sathenjiswa ukuthi sizofakelwa ipayipi elithutha indle kodwa namanje akwenzeki lokho. Sabizelwa umhlangano satshelwa ukuthi sizofakelwa lamapayipi umasipala unebhajethi ka-70 Million kodwa manje sebesitshela ngo 5.9 million. Isiyephi yonke lena enye imali? Manje sesitshelwa ukuthi imizi ezohlomula ngalamapayipi ileyo eseduzane nalezi zikole. Kungani kungaqalwa ngomphakathi ngoba kade wayibika inkinga yawo? Lemali ekuthiwa ikamasipala kanti ayiphumi yini emnyangweni wezezindlu kungani manje ithathwa iyofakwa ekulungisweni kwezinto zesikole?
“Uma kungukuthi le mali abasitshela ngayo eyezikole kulungile abaqhubeke bafake amapayipi ezikoleni kodwa thina siyayifuna eyethu lena esathenjiswa yona ukuthi sizofakelwa ngayo amapayipi athutha indle. Asikwazi ngisho ukwenzani ngenxa yephunga,” kubeka yena.
Lo mphakathi uthi angeke uze uyeke ukumjisa uksuebenza kwenkontileka bengakazitholi izimpendulo abazifuna kumasipala futhi ingakafiki iMeya ukuzokwamukela uhlu lwezikhalo zawo.
Uphinde waveza ukuthi usukhathele ukuthula ngoba uma bethula bebuka izinto zibheda kudlalwa ngabo. Ngaphandle kwenkinga yezindlu zangasese ezingekho esimweni lo mphakathi ukhala ngokuthi ayikho into abenzelwa yona ukuthuthukisa le ndawo njengoba nemigwaqo yabo ingekho esimweni namapayipi amanzi nawo futhi evuza.
Bathe ikhansela laku lendawo liyazi ngalezi zinkinga ababhekene nazo kodwa ayikho into eyenzekayo.
Ikhansela lakulendawo uNkk Sibongile Mncwango utshele i-Echo ukuthi yena akazi lutho ngemali engu-70 million lona oshiwo abahlali kodwa wazi ngo-R5.9 million okuyiwona awutshela abahlali.
“Lena imali asebekhuluma ngayo mina angiyazi. umhlangano engawubiza ezinyangeni ezimbili ezedlule ngabatshela ngemali engu-R5.9 million nokwathiwa incane kakhulu ukuthi ingafakela ipayipi lomphakathi wonke. Kwabe sekuvunyelwana ngokuthi kungcono kuzoqalwa ezikoleni kanye nemizi lena eseduze kwazo izikole. Umphakathi wavuma ngo elethu, ngaze ngabuza ukuthi ikhona yini into abafuna ukuyisho okanye abafuna ukuyibuza kodw abathi konke kuhamba kahle,” kubeka yena .
Uthe ngemuva kwalesi sigameko sokuvalwa kwamasango alapho kusebenzela khona nkontileka uzamile ukukhuluma nabahlali ebatshela ukuba akulungile ukuba baphazamise ukusebenza ngoma loko kuzomisa intuthuko endaweni.
“Abafunanga ukungilalela kodwa bathe bona bafuna ukuthi kufike uMeya kube uyena ozokhuluma nabo ngalolu daba. Skufanele ukuthi uma ngabe kulethwa intithuko endaweni bese abahlali bayayimisa. indawo yase-France iyayidinga intuthuko ngoba asinalutho asinayo ngisho imigwaqo.”
Okhulumela umasiplaa uMsunduzi uNks Thobeka Mafumbatha uthe loluhlelo laphasiswa n gokwezamabhizini kanti uhlelo lowebhizinisi lubandakanya izikole kanye nezindlu zomphakathi. Uthe lolu hlelo lwenziwa ngezigaba ngalemali ekhona njengamanje.
“Uhlelo lolu olukhona lubiza imali engaphezu kuka R4 million. Isinqumo sokuthi kuqalwe ngezikole sathathwa ngemuva kokuba kuhlanganiwe nomphakathi waka-ward 13 kanye no-ward 18. Loku kuxhumana kujwayele ukwenziwa vele uma kuzoba khona uhlelo olufana nalolu kanti loku kwenziwa amakhansela.
“Isimo esingagwinyisi amathe sakulezi zikole bekumele kubhekwe.Umasipala uyazazi izikhalazo zomphakathi ngalolu hlelo lokufakwa kwalamapyipi ezikoleni ezifunda izingane zazo. Umnyango wezamanzi kanye nezokuthuthukiswa kwendle kumasipala umatasa uzama ukwenza izicelo zemali ukuze lolu hlelo luzokwazi ukuthi luqhubeke lungenele ezindlini zomphakathi njengokwesivumelwano,” kubeka yena.